Ungathuthukisa kanjani amaqhinga wesaziso sesaziso se-prospriate ekolishi
Akungabazeki ukuthi ukuphepha kuseyinkinga kusukela ngesigameko sokudutshulwa se-sandy sandy sandy sandy esisesikoleni.Izinto ezizamile ukuqinisa ukulawula ngaphezulu kwe-T ...
Akungabazeki ukuthi ukuphepha kuseyinkinga kusukela ngo-2012 Fatal Sandy Hook Isigameko esikoleni. Iziphathimandla zizamile ukuqinisa ukulawula ezindaweni zasekolishi, kepha izilonda zibonisa ukuthi kukhona izinto eziningi okufanele zenziwe.
Mayelana nobuchwepheshe bokuphepha, ukuthi izinhlelo zesaziso esiphuthumayo zidinga ukucatshangelwa ngokucophelela. Ngenkathi izikole eziningi emazweni athuthukile zizoba nazo uhlobo oluthile lohlelo lwesaziso lwesaziso, isimo samanje sanikeza izixazululo zokuxhumana zanamuhla ezingaba mhle zisetshenziswe engozini yenhlekelele. Ngenhlanhla, abakhiqizi besikole nabakhiqizi bezokuphepha bakubona lokhu.
Finyelela emhlabeni wonke: Kuya ngesilinganiso se-orgnization, izinhlelo zesaziso esiphuthumayo kuzofanela zeqe imingcele evamile. Ngaphezu kwalokho, ngokwenza kwasendaweni kwezitayela ezivelayo ezinhlelweni zesaziso esiphuthumayo se-campus
Ulimi, abasebenzisi bangathatha izexwayiso zokuqwashisa nge-accent yokuthanda kwabo.
Iselula ngokuphelele: Izingcingo eziphathwayo ziye zedlula imisebenzi yazo eyisisekelo ukuze ibe yi-accountment efanelekile yezinhlelo zezaziso eziphuthumayo. Abasebenzisi bazokwazi ukuthatha izexwayiso kumadivayisi wabo, kanti abasebenza ngokusebenza bazokwazi ukulungisa uhlelo lokuqwashisa nganoma iyiphi ithuluzi elinikwe amandla.
Lokhu kungafakazela abasebenzisi bendawo abakwaziyo, ngokwesibonelo abafundi baseCampus, bazifune ezimweni lapho kunokwamukelwa khona ubuchwepheshe.
PHAMBI Kungani kufanele sifake amakhamera ezokuphepha efulethini
Imililo yeFort Mcmurray: Ikhamera yezokuphepha ithumba i-blaze iklebhula indlu yaseCanada OLANDELAYO